Taariikhda Bollywood-ka min bilaaw ilaa dhamaad iyo marxalidihii ay soo mareen Qaybta 1-aad – Filimside.net
September 18, 2017 Zakarie Abdi
Taariikhda: September 18, 2017
Bollywood sida rasmiga ah waxa loo yaqaan fanka Hindiya gaar ahaan aflaanta lagu sameeyo luqada Hindiga oo ay ku hadlaan 41% shacabka dhul weynaha Hindiya ku nool.
Xarunta Bollywood-ka waa magaalada Mumbai oo ka tirsan gobolka is maamulka Maharashtra, waxayna Bollywood-ka farac ka yihiin shirkadaha kala duwan ee Hindiya ka jiraan kuwaas oo la isku dhaho Indywood.
Daqliga marka laga hadlaayo Bollywood-ka waa shirkada ugu badan daqliga lacagaha fanka soo galo dhamaan shirkadaha gudaha Hindiya ka jiraan waxayna helaan 43% lacagaha Boxoffice-ka laga kasbado dhamaan shirkdaha kale ee Hindiya marka lala bar bar dhigo.
Telugu iyo Tamil oo 63% daqliga Boxoffice-ka kasbadaan sanad walbo halka shirkadaha kale ee yar yar isku geyn ahaan Boxoffice-ka ka kasbadaan 21% darasaadii ugu dambeesay 2014 ayaa xogtaan lagu soo bandhigay.
Bollywood waa shirkada aflaanta sameyso ee dunida ugu weyn marka ay noqoto shaqaalaha ka shaqeeyaan iyo tirada aflaanta ay sameeyaan.
Bollywood-ka cel celis ahaan sanad walbo waxay sameeyaan 200-filim waxaana Hindiya oo dhan shirkadaha ka jiraan sanadkii ay sameeyaan 1950-filim wadarta guud.
Magaca Bollywood Sida Uu Ku Yimid Ama Erey Bixinta Bollywood:
Ereyga Bollywood asal ahaan wuxuu ka yimid in labada xaraf ee hore ‘Bo’ laga soo qaatay Bombay oo hada Mumbai iyo Hollywood oo laga soo qaatay xarafka ‘H’ marka laga tago sidaa darteed Bo+ollywoo = Bollywood.
Sidoo kale shaqsiyaadka sameeyeen ereyga Bollywood waxay dhiiri galin ka qaateen ama ku daydeen Tollywood oo ahayd shirkad ka jirtay West Bengal oo la aas aasay sanadii 1932.
Tollywood waa shirkadii ugu horeesay ee magac faneed sameesato waxayna magacaan kasoo qaateen shirkada Hollywood ee dalka Mareekanka ka jirtay xarunteeda tahay magaalada California.
Tollywood waxaa laga bilaabay magaalada Calcutta oo xarun u ah gobolka West Bengal, hadana magaca Tollywood waxaa shirkad ahaan u adeegsadaan shirkadaha ka dhisan gobolada waa weyn Telangana iyo Andhra Pradesh ee is maamulka dhul weynaha reer Telugu hoos imaadaan kuna yaaliin Koonfurta Hindiya.
Sidoo kalena ereyga Bollywood wuxuu daafaha caalamka ku faafay markii fanka Hindiya uu heerkii ugu sareesay gaaray 70-maadkii xiligaasna Bollywood-ka caalamka waxay ka qabsadeen saameyn ahaan Hollywood-ka taasi oo sababtay in dhulal badan oo caalamka laga barto aflaanta Hindiya sameeyaan.
70-maadkii ayay Bollywood-ka noqdeen shirkada ugu weyn ee caalamka ka jirto dhanka sidoo kalena sameyso aflaanta ugu badan shaqaalaha ugu badan ka tirsan yihiin ilaa haatana wey yihiin.
Bollywood Waa Magac Ee Xarun Ahaan Uma Jiraan:
Waxa muhiim ah inaan wada ogaano in Bollywood-ka aysan ahayn meel xarun ah oo la dagan yahay ama lagu shaqeeyo sida Hollywood oo kale.
Balse waa magac muujinaayo ama astaan u ah aflaanta Af Hindiga lagu sameeyo luqada 41% shacab weynaha Hindiya ku hadlaan.
Taariikhda Bollywood-ka: Xiligii Bilawga Fanka Hindiya (1910 – 1940):
Raja Harishchandra waa filimkii ugu horeeyay ee Hindi sameeyeen oo aan xitaa la hadleyn (Silent film) wuxuuna soo baxay sanadii 1913 waxaana Director ka ahaa Dadasaheb Phalke, waxaana sheego ahaan lagu saleeyay noloshii boqorka Hindiya haleeyga taariikhdeedii hore u ahaa Raja Harishchandra.
Filimka Raja Harishchandra waqti ahaan wuxuu soconaayay 40-daqiiqo sidoo kalena miisaniyaad ahaan waxaa lagu sameeyay 20,000 Indian Rupees.
Filimka Raja Harishchandra 21-kii April 1913 ayaa lagu marti qaaday daawashadiisa madaxdii Bombay iyo joornaalistayaal balse shacabka waxay ka daawadeen 3 May 1913 waxaana la saaray tiyaatarka Coronation Cinema, Girgaon, waxaana la sheegay in dad aad u fara badan wadooyinka soo buux dhaafiyeen waana filimkii u horeeyay ee ganacsi ahaan gadmay balse xog lagama haayo ganacsigii uu sameeyay ee laga macaashay.
Filimkii ugu horeeyay ee cod lahaa ama la codeeyay wuxuu ahaa Alam Ara (1931) waxaana Director ka ahaa Ardeshir Irani wuxuuna gaaray guul taariikhi ah halkaasna waxaa laga cabir qaatay in fanka Hindiya heeso, muusig iyo hadalado wacan bulshada u baahiyiin ee kaliya fanka ku koobneyn jilitaan.
Wixii markaas ka dambeeyay Bollywood-ka iyo dhamaan shirkadaha kale ee gobolada ka jireen waxay bilaabeen sameynta filimo la codeenayo ama cod leh.
Filimka Alam Ara waxa tiyaatarka Majestic ee Bombay ku yaalay laga daawaday 14 Maarso 1931 wuxuuna noqday mid taariikh cusub bilaabay dadka ka xiiso dhiigi waayeen boolis fara badan la isugu keeno tiyaatarka si ay saxmada dadka u kala maareeyaan wuxuuan waqti ahaan soconaayay filimkaan 124-daqiiqo.
Dhamaan jilaayaasha filimkaan hal mid ayaa ka waaray oo fanka saameyn ku yeeshay waa Prithviraj Kapoor waana aabaha reer Kapoor ku af tirsadaan oo dhalay Raj Kapoor, Sham Kapoor iyo Shashi Kapoor.
Filimka Alam Ara waa la waayay ama waa la xaday keedkiisa dib looma helin markii dagaalka labaad ee aduunka dhacay laakiin madxafka qaranka Hindiya ee aflaanta keydiyo waxay nuqul Copy ah ka heleen filimkaan sanadii 1967 hadana waxay hayaan asigoo muuqaalkiisa tayo laheyn laakiin la daawan karo.
Xiliyadii 30-maadkii iyo 40-maadkii fanka Hindiya dhulka ayuu galay dhaqaalo xumadii caalamka ka dhacay, dagaalkii labaad aduunka iyo dagaaladii Hindiya xurnimada ku baadi goobeesay ayaa sabab u ahaayeen in fanka la iska hilmaamo.
Waxaa jireen filim sameeyayaal dhabar adeegeen kuwaas oo shaqo dhib badan xiliyadaas mugdiga ahayd waxayna inta badan sameyn jireen aflaan lagu lifaaqayo ama dadka lagu kicinaayo si Hindiya xurnimo dhameestiran Inigiriiska kaga hesho.
Sanadii 1937 Director Ardeshir Irani wuxuu maal galiyay filim labaad oo hirgalay kaasi oo lagu magacaabo Kisan Kanya halka Moti B. Gidwani uu Director ka ahaa.
Kisan Kanya waa filimkii ugu horeeyay ee Hindi ah kaasi oo midib leh ama kalar leh oo la daawado laakiin shirkad Ameerikaan ah ayaa ka caawisay hirgalinta mashruucaan taariikhiga ah.
Filimkaan waxaa lagu duubay gudaha Hindiya laakiin midib ama kalar waxaa loogu soo yeelay gudaha Jarmalka waxaana ku baxay qarash xoogan tijaabadan.
Filimka Kisan Kanya wuxuu waqti ahaan soconaayay 137-daqiiqo wuxuuna gaaray guul dhex dhexaad ah madaama qarash waali ah xiligaas lagu sameeyay.
La Soco Qaybta Labaad Taariikhda Bollywood-ka Markii Xiliga Dahabiga Ahaa La Galay (1940 – 1960)
Waxaa Aqrisay 1,880
kacab jr says:
thanks filimside waad Ku mahadsantihiin shaqada aad uqabateen bulshadiina
abdi kaafi says:
sxbyl wadkumahadsantihiin had & jeer sida quruxdabadan oo aadnagusogudbiiin waxwalba oo laxariira aflaamta runtii siwayn ayaanodeqden filimside
Masha Allaah Saasaan Kaa Rabaa Sxb Mcn Maqaaladaan oo Kale Ayaa Iga Daadagayaan Horey ayaan Uga Arkay Wikapedia Run ahaantii Maqlaaka Eey Ka Qoreen Bollywood-ka Waa Mid Aad U Dheeraa Lkn Sideey Tahay ayaa U Qaadaa Dgigtay Waana Warbixin Mudan In Lagu Raaxeeysto Sidoo Kalane Hollywoor-kane Waad Ku Xujin doontaa Isla Sidaan ayaan Ku Arkay Wekapedia ah Hollywood-kq Filimkoodii Ugu Horeeyay Inuu ahaa Filim Amusnaan ah Oo Silent Movie ah Wuxuu Soo Baxay Sanadii 1910 Wlhi Waa Waagii Jaahilnimo Lagu Jiray Dunidane Xiligaas Weey Danbeeysay Filimkaan Wuxuu Soconaayaa 17 Minnetes In Old Californei Marka Wekapedia ah Waxeey qoraan Ma Sax Baa Mise Qaladkooda ayaa Badan Ibkastoo Xogo Badan Oo Aflaanta ah Keediyaan
War filmside maantuu color yeeshay waa barnamijki ugu horeeyay oo aan la fajaco horay usocda wllayal qaybta kalena waqti dhow soo gudbiya
saaas laga rabaa saki xiisii dadka soo celi maqaalo ku celis ah page iminka waxay noqdeen 70% markaa wararka noocana soo bad I inshlh